प्रचण्डलाई देउवाले भने- सरकार चलाएकै छु, तपाइँलाई केको चिन्ता हो ? - Sutra News
प्रचण्डलाई देउवाले भने- सरकार चलाएकै छु, तपाइँलाई केको चिन्ता हो ?
संविधान बचाउन माओवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छः प्रचण्ड
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ०७८ भदौ २९ गते दुई महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन भएकै दिन उनले कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ र त्यसपछि एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसयता उनले अहिलेसम्म आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
१७ मन्त्रालय दुई महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि काम–कारबाही प्रभावित हुने नै भए । जानकारहरू देउवा सरकारमा अहिले देखिएको अकर्मण्यताको दूरगामी प्रभाव रहने बताउँछन् ।
केपी शर्मा ओलीको विस्थापन गरेर बनेको देउवा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । स्वयं सत्ताधारी दललाई पनि सरकारको शिथिलता टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
सरकारको रवैयालाई लिएर असन्तुष्टि र आलोचना बढे पनि देउवाले भने त्यसको महसुस नगरेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार, देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि आफूले सरकार राम्रैसँग चलाएको दावी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको बिलम्वले सरकारको छवि र कामकारबाहीमा परेको प्रभावबारे प्रचण्डले देउवासमक्षा भेटघाटका क्रममा चासो राख्ने गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जवाफमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभए पनि सरकार राम्रोसँग चलेको जिकिर दावी गर्ने गर्नुभएको छ ।’ साघुं न्यूज
प्रकाशित :भाद्र ३०, २०७८ बुधवार - ११:५१:४२